सत्रालो कटेन विवेकशिल साझाको - Darpanpost
» विचार अंक: 13597
सत्रालो कटेन विवेकशिल साझाको
कतिबेला मिलन कतिबेला विछोड पत्तै छैन । हुन त लिला यस्तै खेल्नु पर्छ नै छ । जति खुसि मिल्दा हुन्छ त्यो कुनै क्षणको लागी मात्रै हो, यस्तै यस्तै चरण भईरहन्छ । नेपाली राजनितिमा जोर र विजोर त सदाको सम्पदा नै वन्यो । क्रान्ति ठुलो कुरा त होईन तर सानो सानो कुरा बाट सुरु भई ठुला आधि तुफान एकै साथ ल्याइदिन्छ । समय अनुसार सबैले परिवर्तन हुन आजको आवश्यकता हो । नेपालमा राजनिति परमपरागत हिसाबले अगाडी अरुकै भर परेर बढ्यो यो हिसाबले नेपाललाई निकास दिन सकेन भनेर नया जोस जागरका साथ केहि वर्ष पहिले नेपाली भुमीमा पनि वैकल्पिक शक्तिmका रुपमा नया पाटी गठनको प्रक्रिया सुरु भए अनुरुप विवेकशिल नेपालि दल र साझा पाटी हुन । सामाजिक अभियन्ताहरुले नेतृत्व गरेका एउटै उदेश्यका साथ स्थापना भएका दुवै पाटी विच राजनितिक सहमतिका आधारमा २०७४ साउन ११ गते विवेकशिल साझा पाटी एकता भई घोषणा भयो ।
नेपालको संविधान अनुरुप संघियतालाई कार्यान्यनको लागी जुन भुमिका विवेकशिल पाटिले खेल्छु भनेर पाटिको एकता पछि थालेका थिए, ति सबैको उपलब्धि के ? जनताले एक्कासि किन विवेकशिल साझा पाटिलाई रोजे यसको लेखाजोखा त कहाँ छ कहाँ छ देश हाक्छौ देशलाई निकास दिन्छौ भनेर गठन भएका युवा संगठनहरुले समाज बनाउन जनमत संकलन गरे तर फितलो सोचाईमा काम भयो जुनकाम आफैलाई अख्खम भएर आयो । जनताले सोध्ने सक्ने धेरै प्रश्न आज विघटन पाटि सामु छन । जसमध्ये जनतालाई वैकल्पित शक्ति भनेर चिनाउन देखाउने खालको काम खै ? निर्मला पन्तको न्यायको लागी चालेको वैकल्पिक आन्दोलन खै ? वाइडबडि विमान खरिदमा यत्रो राज्यकोषको भष्टाचार हुदापनि ति भष्टाचारीलाई कारवाहिका लागी सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको खै ? बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको दिन प्रतिदिन मुल्य बृद्धिले उपभोक्ताहरु हैरान छन उच्च मुल्य रोकावटका लागी वैकल्पिक अभियान खै ? कालो बजारि,घुसखोरीका धुम्सिहरुले सखाप पार्दा पनि नियन्त्रणका लागी अभियान खै ? प्रत्यक दिन नेपालि युवाहरुले नेपाललाई विदाईका हात हल्लाउने अनुपात दिनका दिन बढ्दो छ यदि यो अनुपात रहिरहनेह हो भने अबको दुई दशक पछि नेपालमा रहने चलायमान युवा न्युन हुने अवस्था थाहा हुदाहुदै पनि यो जनशक्तिmलाई स्वदेशमा नै बस्ने वातावरण गर्नेको लागि निश्चित कार्यदिशा सहित सुझाब दिएको खै ?
आफुलाई वैकल्पिक शत्तिका रुपमा चिनाउदै आयको विवेकशिल साझा पाटीले गत वर्षको निर्वाचनमा २ लाख १२ हजार ३ सय ६४ मत प्राप्त गर्यो । उक्त जनमतले साच्चै नै नेपालमा जनताले गरेको विश्वास एकै पटक त्यो उदाहरणकै रुपमा पाएको सफलता नै हो । जुन आश जनताले गरी विवेकशिल पाटिलाई गरे ति जनताको एक एक मतको मुल्याङकन गछौ भनेर तमतयार कस्सियको पाटिले १७ महिनामै पाटि प्रति जनताले गरेको आश भरोसामा नपुग्दै टुङगेको छ । यति बेला यो पाटि विघटनले गर्दा बजारमा निकै चर्चा पाएको छ । भलिभल खेलमा सत्र अंङकलाई अलि गम्भिर रुपमा मात्र नलिई यदि खेलमा १७ अङक भन्दा माथि नबढाउन सकि विपक्षले जित हात पारेको बेला सत्रालो कटाउन नसकि खेल हारीयो पनि भनिन्छ । हो यस्तै खेल यतिबेला विवेकशिल साझा पाटिले भाग लिएको खेलमा सत्रालो नकटेर विघटन भएको छ । अब सोच्न जरुरी छ, के साच्चै विवेकशिल साझा पाटि आफ्नो भाषण र घोषणापत्र अनुसार अघि बढेको थियो या जनतालाई झुक्कायो ? एउटा कुरा के प्रष्ट हुन जरुरी छ भने नेपालमा राजनिति जगतमा कल्पिक र वैकल्पिक शत्तिका नामको राजनितिले जनतामा एक प्रकारको क्रास पैदा गरेको छ, जसले अस्थिर निति पालना गर्ने जनता बाध्य छ । सम्पुर्ण जनहरुमा अबको नेपाललाई बनाउने जिम्मा छ अठोठ गरौ आफुलाई सहि बाटो हिडाउने न्यायधिस बनौ म भन्दा माथि उठि हामि बनौ । जय युवा जय मातृभुमि जय नेपाल ।